I-isiCastilian (Castellano) okanye IsiSpanish (español) lulwimi Romance kwiqela Ibero-Romance ukuba bavela iziyelelane eziliqela Latin oluthethwa emntla wombindi Iberia ehlabathini ngenkulungwane yesithoba. saa ngcembe nokwandiswa loBukumkani Castile (langoku kumntla Spain) ukuya kumbindi nakumzantsi saseIberia ngamaXesha Aphakathi.
Inguqu ukusuka aphakathi ukuya Spanish mihla yabalasela utshintsho kunye oonobumba ngokuca- ikhwela ulwimi yamandulo, apho yaqala ngenkulungwane elinesihlanu. Ekuqaleni ngembali yaso, isigama Spanish iye natyetyiswa qhagamshelana yayo Basque kunye Arabic kunye ulwimi iyaqhubeka ukuba basebenzise amagama eelwimi zasemzini ezahlukahlukeneyo nezinye iilwimi, kwakunye nokuphuhliswa amagama amatsha. YaseSpain becala kuziswa Melika kwakunye Afrika Asia Pacific, kunye nokwandiswa koBukhosi baseSpeyin phakathi kwiinkulungwane elinesihlanu kwaye yeshumi elinesithoba, ezaba ulwimi ibaluleke kakhulu kurhulumente kunye nezorhwebo.
Ngo-1999 kwakukho, ngokutsho Ethnologue, yezigidi 358 abantu abathetha iSpanish njengolwimi lweenkobe kunye lilonke labantu abathetha million 417 ehlabathini lonke. Okwangoku, le amaxabiso ukuya ku 400 kunye nabantu million 500 ngokulandelelanayo. Spanish lelona lwimi ezithethwa yesibini ehlabathini, emva Mandarin. Mexico iqulethe inabantu abaninzi ulwimi-ukuthetha. Spanish yenye kwiilwimi ezintandathu ezisemthethweni yeZizwe eziManyeneyo (UN) yaye usetyenziswa njengolwimi olusemthethweni European Union, Mercosur kunye Union of South American yeZizwe (UNASUR).
Ngenxa yokuba khona layo bekhula ngobuhlanga kunye nenkcubeko ezithandwayo eUnited States, ingakumbi kwiimo ukukhula ngokukhawuleza kwi Sun Belt, iSpanish wesibini ulwimi bafunda luninzi zizithethi IsiNgesi lweenkobe. Elikhulayo nozinzo kwezopolitiko nezoqoqosho ezininzi iintlanga ezinkulu iSpanish abathetha, ubungakanani enkulu geographical yolwimi in Latin America naseYurophu lokhenketho ukuthandwa nokukhula yezindawo siphila ngokwenkcubeko zifumaneka kwihlabathi kokufika ziye negalelo elibonakalayo ekukhuleni ukufunda iSpanishi njengoko ulwimi angaphandle emhlabeni. Okwangoku, isiSpanish ulwimi lwesithathu lusetyenziswa kwi Internet emva IsiNgesi kunye Mandarin. Kubalulekile kwakhona lwimi kakhulu kufundwa lwesibini nolwimi lwesibini nonxibelelwano lwamazwe ngamazwe, emva IsiNgesi, ehlabathini lonke.
↑ A. Vergaz, Miguel (2010-11-07). "La RAE avala que Burgos acoge las primeras palabras escritas en castellano" (in es). http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/07/castillayleon/1289123856.html.